REJO BEEL: Halyey Hore U Soo Maray Arsenal Oo NIYAD JABIYEY Jamaahiirta Gunners Isaga Oo Saadaaliyey Tirada Goolasha Ee Uu Mid Walba Aubameyang & Lacazette Xilli Ciyaareedkan Dhalin Doono | Laacib.net
Weeraryahanka Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang xilli ciyaareedkan wuu dhibtoon doonaa oo ma dhalin doono wax ka badan 15 gool.
Waxaa aragtidaas lama filaanka ah qaba halyeygii Arsenal Nigel Winterburn.
Gunners waxa ay xiddigga ka soo bixisay £57million bishii Janaayo waxa uuna u dhaliyey 10 gool 13 kulan oo uu horyaalka u saftay kaddib markii uu uga soo biiray Borussia Dortmund.
Tiradaas waxaa uga horreeyey 13 gool oo uu 16 ugu dgaliyey Borussia Dortmund qeybtii hore ee horyaalka Bundesliga.
Emerick Aubameyang waxa uu dhaliyey wax ka badan 15 gool dhammaan saddexdii xilli ciyaareed ee uu Bundesliga joogay isaga oo noqday mid ka mida weeraryahanada ugu halista badan Germany.
Xilli uu si qabow ku bilaabay xilli ciyaareedkan marka laga yimaado in ay muuqdaan calaamado wanaagsan oo ay iskula jaan qaadi karaan Lacazette, hadana Winterburn waxa uu ka baqdin qabaa in ay bandhig wanaagsan labadooda sameyn doonin.
Labadooda mid hal gool ayey dhaliyeen xilli ciyaareedkan waana kulankii Cardiff kahor in aan kulmada qaramada la aadin.
Waxa ay gool ka hooseeyaan labadii dhaliye ee hoyraalka ugu sarreeyey xilli ciyaareedkii hore;Harry Kane iyo Mohamed Salah balse waxa uu Winterburn qabaa in aysan la loolami karin weerayahanada ugu wanaagsan England.
“Waan ka niyad jabsannahay sida uu ol’olahan ku bilaabay Aubameyang,” waxa uu sidaas u sheegay Sports Bet.
“Waxaan umaleenayey in uu si xooggan u bilaabi doono kaddib sidii wacneyd ee uu bishii Janaayo markii lala soo saxiixday sameeyey.
“Hase ahaatee, waa weeraryahan mar walba raadinaya abuuridda fursado waxa uuna heli karayey dhawr gool xilli ciyaareedkan haddii uusan fursadaha daayicin.
“Ma arko Aubameyang ama Lacazette oo helaya wax ka badan midkoobna Premier League xilli ciyaareedkan.
“Ma arko midkood oo la loolamaya ciyaaryahanada sida Sergio Aguero ama Kane, qiime kasta halaga soo bixiyee.”